Boliiska oo xiray nin isku deyey inuu xubintiisa taranka mariyo mashiinka adeegga fududeeya ee suuqyada la dhigo – Filimside.net
November 19, 2017 Super Admin
Taariikhda: November 19, 2017
Seattle City oo ah magaalada ugu weyn Washington State ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid ah falalkii ugu qariibsanaa dunidaan.
Maxaa yeelay boliiska magaalada Seattle City ayaa xabsiga u taxaabay nin isku deyey inuu xubintiisa taranka marsiiyo mashiinka caanka ah ee loo yaqaanno self-service checkout kaasoo la dhigo suuq-yareyaasha.
La yaab ayey ku noqotay dadkii ka adeeganayey suuq-yarahaan markii mid ka mid ah macaamiishii goobta timid uu surwaalka dhigtay ka dibna nigiska ku daray si uu scan-ka Self-checkout (Mashiinka sida aadanaha oo kale u shaqeeya kaasoo laga dalbado wax walba oo goobtaas yaalla, lacagtana isagu kaa reebaya) u mariyo xubintiisa taranka.
Maamulka suuq-yarahaan ayaana si degdeg ah u wacay boliiska, iyagoo durba xabsiga u taxaabay ninkaan aan magaciisa la shaacin, kaasoo ka yaabsaday reer Seattle City.
Ninkaan ayaa haatan waxaa haatan la horkeeni doonaa Maxkamad, waxaana markii ay boliisku waydiiyeen sababta uu xubintiisa tartanka u mariyey scan-ka Self-checkout uu daaha ka qaaday inuu doonayey keliya inuu dadka ka qosliyo… Laakiin ma ahan arrin la aqbali karo, sida ay boliisku caddeeyeen, waxaana shaki la geliyey haddii uu maskax ahaan fayow yahay ninkaani.
Pro Waxad Noso Gudbisen In Rekesh roshan ladhawacay Mar 20001 Marka Zxp Gangestar abu slem Flimka Muqalkee kulahaa
Wax muuqaal ah kuma lahan waa gaangester run ah oo dadka dhaco sidoo kalena dilo siduu muuqaal ugu yeelanaa filimka?
Flimka kahona pyaar hai